ParcelTrack - Package Tracker for Fedex, UPS, USPS 2.1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.1.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ParcelTrack - Package Tracker for Fedex, UPS, USPS
ParcelTrack - Package Tracker for Fedex, UPS, USPS ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ParcelTrack - သင့် packages များနှင့်တင်ပို့ရောင်းချမှုများအားလုံးကိုခြေရာခံဖို့တစ်ခုမှာ App ကို (UPS, USPS, DHL (Express), FedEx, TNT, OnTrac, Lasership, Landmark ကမ္တာ့, ကနေဒါ Post ကို, Purolator, တော်ဝင်မေးလ်, ဗြိတိန်နိုင်ငံမေးလ်, DPD, ParcelForce, GLS, Hermes, တိုက်ရိုက် Link ကိုမန်စီးတီး Link ကိုဗြိတိန်နှင့်အခွားသူမြားစှာ)
ParcelTrack တစ်ခုတည်း app ကိုသို့ကွဲပြားခြားနားသောပေးအပ်ခြင်းန်ဆောင်မှုမှသင်၏တင်ပို့ရောင်းချမှုများအားလုံးပေါင်းစပ်။ အခမဲ့ Push ကို-အသိပေးချက်များသင့်ရဲ့ပေးပို့အဆင့်အတန်းနှင့်အတူယနေ့အထိသင်တက်စောင့်ရှောက်လော့။ အဆိုပါ ParcelTrack Inbox ထဲမှာကပင်ပိုမိုအဆင်ပြေသင့်ရဲ့ packages များကိုခြေရာခံဖို့ကိုမှန်ကန်စေသည်။
• Push ကိုအကြောင်းကြားစာများ - ParcelTrack အခမဲ့တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာများပေးပို့ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အထုပ်ကိုအပ်ခံရသောအခါသင်သိ။
• Delivery ခန့်မှန်းချက် - ဤဝန်ဆောင်မှုကိုထောကျပံ့ပေးသမျှသောပေးအပ်ခြင်းန်ဆောင်မှုများအတွက် ParcelTrack သင့်ရဲ့ပေးပို့စီစဉ်ထားသည်အခါသင်သိပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဝေး DHL, DHL Express, UPS နှင့် FedEx ပေးပို့ခန့်မှန်းချက်ပေး။
• ParcelTrack Inbox ထဲမှာ - လက်ဖြင့်ရှည်လျားသောခြေရာခံနိုင်တဲ့နံပါတ်များရိုက်ထည့်ရန်မလိုအပ်: တစ်ခုချင်းစီကို ParcelTrack အသုံးပြုသူတစ်ဦးကိုကျပန်းအသုံးပြုသူ ID နှင့်အီးမေးလျ in​​box ရဲ့တာဝန်ပေးသည်။ သင့် email inbox အီးမေးလ်ပေးပို့လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ server ကိုအဆင်ပြေစွာအခြေရာခံခြင်း ID ကိုပါရှိသောတူးဖော်နှင့်သင့်အကောင့်မှကှကျကထပ်ပြောသည်။ ရိုးရှင်းစွာအသင်တို့၏ ParcelTrack Inbox ထဲမှာမှအမေဇုန်လိုအွန်လိုင်းစျေးဆိုင်ကနေပေးပို့အသိပေးချက်များကို forward ။ ParcelTrack သင့်ရဲ့ပေးအပ်ခြင်း၏တိုးတက်မှုကိုချိန်းတွေ့ကြရန်သင့်အားဖွင့်စောင့်ရှောက်သင့်ရဲ့ ParcelTrack အကောင့်သက်ဆိုင်ရာတင်ပို့ထည့်ပါပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Inbox ထဲမှာ FedEx, USPS, DHL, UPS, TNT, Lasership အပေါင်းတို့နှင့်အတူအခြားထောက်ခံပေးပို့န်ဆောင်မှုများအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။
•အဘယ်သူသည်ငါ့အထုပ်ရှိပါတယ်: သင်၏တင်ပို့သင်၏အိမ်နီးချင်းနှင့်အတူကျန်ရစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်, ParcelTrack ဘယ်မှာသင့်ရဲ့အထုပ်အဘို့ကိုတောင်းရန်သင့်အားပြောပြသည်။ (ပရီမီယံ)
•အလိုအလျောက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောထောက်လှမ်း - သင် ParcelTrack အလိုအလျောက်ပင်ပိုမိုအဆင်ပြေသင်သည်သင်၏ပေးပို့ခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အအောင်, ဒီနံပါတ်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုကို detect တစ်ဦးခြေရာခံနိုင်တဲ့အရေအတွက်ရိုက်ထည့်တဲ့အခါ။ (UPS များအတွက်ရရှိနိုင်, USPS, DHL (Express), FedEx, ကနေဒါ Post ကိုတော်ဝင်မေးလ်, ဗြိတိန်နိုင်ငံမေးလ်, TNT, DPD, ParcelForce, Lasership, Landmark ကမ္တာ့, GLS, Hermes, တိုက်ရိုက် Link ကိုမန်စီးတီး Link ကိုဗြိတိန်နှင့်အပေါငျးတို့သညျအခွားန်ဆောင်မှု)
• ParcelTrack မော်ကွန်းတိုက်: သင်တို့ရှိသမျှကိုသင့်ကိုအပ်တင်ပို့ရောင်းချမှုကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပေးသည်မူသောသင်တို့ ParcelTrack မော်ကွန်းတိုက်အပေါင်းတို့၌အပ်တော်မူ၏ packages များသိမ်းထား။
• Push ကိုအကြောင်းကြားစာများ: သင်၏ဦးစားပေးအရသိရသည်ရန်သင့်တွန်းအားပေးအသိပေးချက်များကို Organize ။ ParcelTrack သင်အကြောင်းကြားရန်ဆန္ဒရှိဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ (ပရီမီယံ)
•ဘားကုဒ် Scanner: သင်၏ကိုယ်ပိုင် packages များသင်္ဘောတင်? ရိုးရှင်းစွာအပင်ပိုမိုမြန်ဆန်ထည့်ရန်သင့်တင်ပို့များ၏ဘားကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနှင့်သင့် ParcelTrack အကောင့်ပိုမိုအဆင်ပြေ။ (ပရီမီယံ)
•ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း: ParcelTrack-Sync ကိုအတူသင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ Android devices များအားလုံးအပေါ်အကြား ParcelTrack တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်မိုဘိုင်း device ကိုအပေါ် ParcelTrack ကိုသုံးပါနှင့်သင့်တက်ဘလက်အပေါ်အိမ်မှာသင့်ရဲ့ချောထုပ်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်လော့။ (ပရီမီယံ)
• Delivery န်ဆောင်မှုများ: ဒီတော့ဝေးကျနော်တို့န်ဆောင်မှု၏ကြီးမားသောနှင့်တိုးပွားလာပေါင်းစည်းကြပြီ UPS, USPS, DHL (Express), FedEx, ကနေဒါ Post ကိုတော်ဝင်မေးလ်, ဗြိတိန်နိုင်ငံမေးလ်, TNT, DPD, ParcelForce, Lasership, Landmark ကမ္တာ့, GLS, Hermes, တိုက်ရိုက် Link ကိုမန်စီးတီး Link ကိုဗြိတိန်နဲ့ကမ္ဘာတဝှမ်းန်ဆောင်မှုများတိုးပွားလာ။
ParcelTracks features တွေကိုတချို့က ParcelTrack ပရီမီယံ၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပင်ပိုကောင်းသင့်တင်ပို့ရောင်းချမှုခြေရာခံစေ။ ParcelTrack ပရီမီယံဖော်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဟာအားဖြင့် ParcelTrack ၏နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအထောက်အပံ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ။ ParcelTrack ပရီမီယံ app ကိုဝယ်ယူ၌ရှိသကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့တချွတ်အလှူငွေဘို့သင့်ကိုမေးတယ်။
ParcelTrack - Package Tracker for Fedex, UPS, USPS အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ParcelTrack - Package Tracker for Fedex, UPS, USPS အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ParcelTrack - Package Tracker for Fedex, UPS, USPS အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
ParcelTrack - Package Tracker for Fedex, UPS, USPS အား အခ်က္ျပပါ
wouz စတိုး 705 194.92k
ParcelTrack - Package Tracker for Fedex, UPS, USPS ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း ParcelTrack - Package Tracker for Fedex, UPS, USPS အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Uberblic Labs GmbH
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://parceltrack.de/datenschutz.html
လက်မှတ် SHA1: A9:46:F3:BE:DA:68:21:0B:8F:60:B1:FB:91:84:FB:2E:08:E1:8B:5D
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Maximilian Podstawski
အဖွဲ့အစည်း (O): Incremental
နိုင်ငံ (C): Germany
ParcelTrack - Package Tracker for Fedex, UPS, USPS APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ